Hafnium Powder, Hf - Goodao Technology Co, Ltd.
inowanzo shandiswa se X-ray cathode uye tungsten waya manufacturng indasitiri Yakachena hafnium ine plastiki, nyore kugadzirisa, kupisa kwakawanda kupisa ngura, Icho chinhu chakakosha cheatomu simba indasitiri Hafnium thermal neutron kubata muchinjikwa chikamu, ndiyo yakanaka neutron absorber, inogona kushandiswa seatomic reactor kudzora tsvimbo uye mudziyo wekudzivirira
Molecular fomula. Hf
CAS Nhamba 7440-58-6
Unhu pfumbu nhema simbi upfu
Nzvimbo yakanyunguduka 2227C
Nzvimbo yekubikira 4602 C
Kuwandisa . 13. 31g / cm3
Zvishandiso inowanzo shandiswa se X-ray cathode uye tungsten waya manufacturngIndustry Yakachena hafnium ine plastiki, nyore kugadzirisa, kupisa kwakawanda kupisa kupisa, Inokosha matenal yeatomiki indasitiri yesimba tsvimbo nedziviriro mudziyo
Hafnium yesirivha grey simbi, simbi inopenya; Pane misiyano miviri ye hafniummetal: hafnium ndeye hexagonal dense kurongedza kusiyanisa (1750 ℃) ine yakakwira shanduko tembiricha pane zirconium. Hafnium simbi ine allotropic misiyano pakakwirira tembiricha.
Hafnium simbi ine yakakwira neutron yekumwaiwa muchinjikwa chikamu uye inogona kushandiswa seacontrol zvinhu zvemagetsi.
Chimiro chekristaro chinogona kukamurwa kuita mhando mbiri: hexagonal dense packing (-) whenthe tembiricha iri pazasi pe1300 ℃; Pamusoro pe1300 ℃, ndiwo muviri wepakati cubic (- fomula).
Simbi yepurasitiki inova yakaoma uye inopwanya pamberi pekusina kuchena. Yakadzikama mukati memhepo, inosviba chete pamusoro kana yapiswa. Firita inogona kubatidzwa nerimi remutambo. Zirconium senge mune zvakasikwa. Kwete mvura, sanganisa acid kana yakasimba alkali chiito, asi zviri nyore kuparara mu aqua aqua uye hydrofluoric acid. Iyo ine +4 valence muchikamu. Hafnium alloy (Ta4HfC5) inozivikanwa kuti ine nzvimbo yakanyunguduka yepamusoro (inenge 4215 ℃) .Crystal mamiriro: Sero iri rakaenzana.
CAS kwete. 7440-58-6
Nzvimbo yakanyunguduka 2 227 ℃
Nzvimbo yekubikira 4602 ℃
Kuwanda kwe 13.31g / cm3 (20 ℃)
Zvemukati muCrust (PPM) 5.3
Zvinhu zviri muzuva: (zvikamu pamiriyoni imwe) 0.001
Element zvirimo mumvura yegungwa: (PPM) 0.000007
Mohs kuomarara 5.5
Chiyero chinofamba nezwi (m / S) 3010
Hunhu hweproton 1.20456E-25
Proton hama yakawanda 72.504
Hafnium yakafanana chaizvo ne zirconium mune zvemakemikari zvivakwa. Iyo ine yakanaka ngura kuramba uye haisi nyore kuti irwiswe neyakajairwa acid base base aqueous mhinduro. Iyo inonyungudika nyore muhydrofluoric acid uye inoumba yakaoma fluorinated. Pakupisa kwakanyanya, hafnium inogona zvakare kusanganisa zvakananga nemagasi senge okisijeni uye nitrogen kugadzira oxides uye nitrides.
Hafnium inobatsira nekuti inoburitsa maerekitironi nyore (semuenzaniso sefilamenti yemwenje weinincandescent). Alloys ye hafnium uye tungsten kana molybdenum anoshandiswa seyemagetsi emagetsi ekukwirisa machubhu. Inowanzo shandiswa mu
X-ray cathode uye tungsten yekugadzira maindasitiri. Hafnium yakachena ine mapurasitiki, ari nyore kugadzirisa, kupisa kwakawanda kupisa uye kurwisa ngura, chinhu chakakosha muatomu yesimba indasitiri. Hafnium thermal neutron inobata muchinjikwa chikamu chakanakisa neutron absorber, iyo inogona kushandiswa seyimbo yekudzora uye yekudzivirira mudziyo mune atomic reactor.
Hafnium powder ANOGADZIRA senge inosimudzira maroketi. MaCathode eX-ray machubhu anogona kugadzirwa muindasitiri yemagetsi. Hafnium alloys inogona kushandiswa semberi magadhi emaroketi mabhureki uye glider yekupindazve mota, uye HF-TA alloys inogona kushandiswa kugadzira chishandiso simbi uye kuramba zvinhu.
Hafnium inoshandiswa sechinhu chinowedzera mukusimbisa maalloys anopisa, senge tungsten, molybdenum, uye tantalum. HfC inogona kushandiswa se carbide yekuwedzera nekuda kwekuoma kwayo kwakanyanya uye nzvimbo yekunyunguduka Iyo yakanyunguduka poindi 4TaCHfC inenge 4215 ℃, inova inonyanya kuzivikanwa kemikari kemikari. Hafnium inoshandiswa seanowana mune dzakawanda aeration masisitimu. Hafnium getter inobvisa okisijeni, nitrogen, nezvimwe kubva muchirongwa chisina magasi. Hafnium inowanzo shandiswa sechiwedzero mu hydraulic mafuta kudzivirira volatilization yemafuta emagetsi munzvimbo dzine njodzi, ine anti-volatilization yakasimba, hunhu uhu, hunowanzoshandiswa mumaindasitiri emagetsi emafuta. Kurapa hydraulic mafuta. Hafnium inoshandiswa zvakare mune yazvino intel45 nanometer processor.
Pashure: Zirconium Upfu, Zr
Zvadaro: Vanadium Powder, V